Waa sidee celceliska biilka raashinkayga sida Faafida kadib?
Bogga ugu weyn Sidee ayay tahay in biilkayga raashinka celcelis ahaan uu noqdo ka dib Faafida?
Faafida cusub ee COVID-19 ayaa ku faafay xawaare aad u xun, oo qaadsiiyay malaayiin isla markaana dhaq-dhaqaaqa dhaqaalaha u horseeday istaag.
Meheradaha iyo shirkaduhu way xidhmeen. Xuduudaha Caalamiga ah ayaa la xiray. Garoomada diyaaradaha ayaa la xiray dalalkuna waxay ku soo rogeen xayiraad adag dhaqdhaqaaqa si loo joojiyo faafitaanka fayraska.
Tobannaan dhimasho ayaa la duubay; qiyaastii 1.41 milyan oo qof ayaa la sheegay inay u dhinteen masiibada. Burburka dhaqaale ayaa durbaba muuqda oo matalaya naxdinta dhaqaale ee ugu weyn ee dunidu soo martay tobannaan sano.
Sida xaqiiqda ah, qaar ka mid ah waddamada leh dhaqaalahooda soo koraya ayaa ku dhici doona xaalad daran hoos -u -dhac dhaqaale sannadka dhammaadkiisa.
Nasiib darrose, dalal ay ka mid yihiin Nigeria, Finland, Hungary, Spain, Mexico, Russia, Romania, Belgium, ayaa durba la halgamaya maaddaama dawladoodu ay ku dhawaaqday inuu jiro hoos -u -dhac ku yimid waddammadii hore.
Runtii waxaan ku qaatay wakhti aan ku sameeyo cilmi baaris macno leh mowduucan waana wax laga naxo in la helo adduunku wuxuu horey u lumiyay $ 1.2 tiriliyan masiibada waxaana la saadaalinayaa inay ku dhacdo $ 2 tiriliyan dhamaadka sanadka.
Hadda, waxay umuuqataa in dunidu xoogaa ka soo kabsatay xanuunkii foosha xumaa ee fayraska laga baqo.
Laakiin weligeen si buuxda ugama soo kaban doonno masiibada ku dhacday?
Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu daran ee masiibada ayaa ah in meheradaha qaarkood aysan awoodin inay soo laabtaan kadib wajiga 2 ee masiibada. Wakhti xaadirkan way xidhan yihiin taasina waxay keentay in dad badani shaqooyinkoodii waayeen.
Waxaa nalagu qasbay inaan aqbalno waxa u eg kan cusub.
Sideen dhab ahaan u rabnaa inaan ula tacaalno wixii ka dambeeyay masiibada Covid-19 gaar ahaan maaddaama ay quseyso kharashaadka ku baxa raashinka iyo sahayda?
Kuwani waa qaar ka mid ah fikradaha aan rabo inaan maqaalkan kula wadaago. Fadlan si dhab ah ii raac oo akhri ilaa dhammaadka.
Markaa, aan soo galno…
Sidee masiibada u saamaysay dakhliga dadka Mareykanka?
A cusub Pew Resahanka Xarunta raadinta wuxuu ogaadey, guud ahaan, afartiiba afar qof oo qaangaar ah inay dhibaato kala kulmeen bixinta biilasha tan iyo markii uu dillaacay coronavirus.
Sadex meelood meel tirada ayaa ku shubtay xisaabaadka kaydka ama hawlgabka si ay u helaan nolol maalmeedkooda, iyo qiyaastii lixdii qofba mid ayaa amaahiyay lacag saaxiibadood ama qoyskooda ama waxay cunto ka heleen bangi cunto.
Dadka qaangaarka ah ee dakhligoodu hooseeyo, 46% ayaa sheegaya inay dhib kala kulmeen bixinta biilasha tan iyo markii masiibada bilaabatay qiyaas ahaan saddex meelood meel (32%) waxay yiraahdeen way ku adkaatay inay bixiyaan kirada ama bixinta amaahda guryaha.
Luminta shaqadu waxay sidoo kale aad ugu sii darnayd kooxaha dadweynaha qaarkood. Guud ahaan, 25% dadka qaangaarka ah ee Mareykanka ayaa sheegaya in iyaga ama qof ka tirsan qoyskooda shaqada laga joojiyay ama ay waayeen shaqadooda sababtuna tahay dillaaca coronavirus, iyadoo 15% ay sheegeen in taasi ay iyaga shaqsi ahaan ugu dhacday. Dadka dhahaya shaqsi ahaan shaqo waa ay waayeen, kala bar ayaa sheegaya in ay wali shaqo la`aan yihiin.
Sida aad arki karto, kuwani waa xogta waqtiga-dhabta ah. Faafida ayaa dhab ahaantii dharbaaxo kulul ku haysa dhaqaalaha ragga. Xataa dadka aan shaqo waayin, waxay ahayd inay yareeyaan saacadaha shaqada ama ay dhimaan mushaharka sababtuna tahay dhaqaala xumada ka timi masiibada.
Iyada oo ay jiraan dhammaan dhicitaannadan dhaqaale, celcelis ahaan qoys Mareykan ah ayaa laga filayaa inay bartaan habab cusub oo loo maareeyo dhammaan kheyraadkooda iyo inay ku sameeyaan waxa la heli karo.
Waxaan si dhab ah maskaxda kuugu haynaa, waana sababta aan maqaalkan kuugu soo qornay si aan kaaga caawino wax ka qabashada qaar ka mid ah arrimahan soo baxaya.
Haddaba sidee ayay tahay in biilkaaga raashinka celcelis ahaan la mid noqdo Faafida ka dib? Soo ogow khadadka soo socda.
Intee in le'eg ayuu celcelis ahaan qofku ku bixiyaa raashinka bishiiba?
Sida laga soo xigtay Waaxda Beeraha ee Mareykanka, sida laga helay dawacsanaan, qiimaha celceliska raashinka bil kasta ee hal qof wuxuu u dhexeeyaa $ 165 iyo $ 345.
Xogtan waxay ka timid hay’ad lagu kalsoon yahay; Waaxda Beeraha ee Mareykanka waxay daabacdaa qorshe cunto oo bille ah oo soo jeedinaya inta lacag ah ee ay tahay in Mareykanku ku kharash gareeyo cuntada.
Waa maxay celceliska biilka raashinka ee qoyska 2?
Biilka celceliska raashinka ee qoyska 2 qof wuxuu ku xiran yahay dhowr arrimood. Midda koowaad waa da'da xubnaha. Midda labaad waa jinsi, tan xigtana waa meesha ay ku nool yihiin.
Waad ogtahay, waxaa la rumeysan yahay in dhallinta dhexe ay wax ka cunaan wax ka yar dadka da'da ah ama dadka da'da ah.
Waxa kale oo la rumaysan yahay in raggu wax ka cunaan dumarka. Ma aqaan sida runta ah in kastoo. Laakiin waxaan u malaynayaa inuu jiro xiriir iyaga ka dhexeeya.
Si kastaba ha ahaatee, halkan hoose waa shax muujinaysa inta ay tahay in qoysku ku qarash gareeyo raashinka ee tirada qoyska ee kala duwan.
Qofka 1 $ 251
2 dadka $ 553
3 dadka $ 722
4 dadka $ 892
5 dadka $ 1,060
6 dadka $ 1,230
Sida lacag loogu keydiyo raashinka qoyska weyn
Halkan waxaa ah hage khabiir oo kaa caawinaya sidii aad lacag u kaydin lahayd gaar ahaan haddii aad leedahay qoys weyn. Qaado waqti aad ku akhrido.
#1: Hantidhow Kharashkaaga Hadda
Haddii aadan garanayn kharashkaaga hadda ku baxa raashinka bil kasta, way adkaan doontaa inaad ogaato meelaha aad qarashka badan ku bixin karto.
Waqti qaado oo baro kharashaadka raashinkaaga oo hel fikrad ah inta aad ku bixineyso toddobaad kasta iyo bil kasta dukaanka raashinka. Haddii aad maqaayadaha wax ka cunto, sidoo kale ku dar.
Si kastaba ha noqotee, way fududaan doontaa inaad hesho sawir sax ah oo ku saabsan caadadaada kharash -garaynta, meesha aad wax badan ku qarashgareyso, iyo aagga aad u baahan tahay inaad yareyso.
Kaliya adiga ayaa garan kara waxa kugu habboon miisaaniyaddaada billaha ah. Marka, waa muhiim inaad ogaato waxa ka dhiga qarashkaaga si aad u go'aansato qorshaha aad dooranayso.
#2: Abuur Miisaaniyadda Cuntada
Markaad samaynayso qorshahaaga maaliyadeed ee cuntada cusub, ujeeddadaadu waa inay noqotaa inaad ka faa'iidaysato doolar kasta oo aad qarashgareyso, gaar ahaan kiiskan waxaad isku deyeysaa inaad hoos u dhigto.
Aqoonso qaar ka mid ah kharashaadka gaarka ah ama ujeedo -yare oo saamayn ku yeelan doona dukaamaysigaaga weyn. Diiwaangeli. Ha kaliya diiradda saarin qarashka lacag gaar ah ama kharash garayn inta aad joogto.
Markaad yeelato qorshe maaliyadeed oo gaar ah oo la faafiyo, waxaad aad u neceb tahay inaad marin habaabiso oo aad u hoos gasho qorshaha maaliyadeed ee kicinta kicinta iibsiyada xilligan.
#3: Mqaado Qorshe
Aadista dukaanka oo leh liis ayaa kaa caawin doonta xakamaynta iibsiyada degdegga ah, haddii aad ku dhegto.
Ka fogow in aad wax ka baratid dukaanka oo aad wax ka iibsato cunto kadib markaad wax cuntid. Sidaan wada ognahay, dukaamaysiga intaad gaajaysan tahay ayaa kaa dhigi karta inaad wax iibsato, ee kuma jirto liiskaaga.
In kasta oo xaqiiqda ah in aysan suurtogal ahayn guud ahaan, waxay sidoo kale noqon kartaa mid waxtar leh in la aado dukaamaysiga cuntada iyada oo aan carruurtu gadaal u soo dhowaan. Carruurtu waa kuwa iibsada wadista tusaalaha ah; waxay arkaan wax ay jecel yihiin waana inay haystaan.
Xaaladdan oo kale, waxaad aadi kartaa dukaamaysiga inta ay dugsiga joogaan ama ilmo haye.
Talooyin lagu yareynayo Miisaaniyaddaada Raashinka Bil gudaheed
Ujeedada ugu weyn ee miisaaniyaddu waa inay kaa caawiso xakamaynta kharashaadkaaga si aad lacag badan u keydiso. Miisaaniyadda raashinkaaduna maahan mid ka reeban.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo kala duwan si loo yareeyo waxaad qarash gareyso adigoon hoos u dhigin tayada iyo dhadhanka cuntadaada.
Maareynta qorshahaaga kharajka raashinka ayaa kaa caawin karta inaad lacag keydiso, isla markaasna, hesho raashinka qoyskaagu u baahan yahay.
Fiiri: 10+ Meelaha ugu Fiican ee Lagu Iibsado Telefoonnada La Adeegsaday Qiimo jaban | 2022
#1: Ku iibso Kuuboon
Helitaanka rasiidhada laga helo dukaamada raashinka waa hab fiican oo lacag loo keydiyo marka la samaynayo dukaamaysiga raashinkaaga.
Maalmahan, maahan inaad ka soo saarto wargeysyada. Kuubannada aad bay u sahlan yihiin in laga helo suuqyada waaweyn, dukaanka dhexdiisa, iyo xitaa raadinta Google.
Tusaale ahaan, inta badan dukaamada raashinka ayaa soo rogaya barnaamijyo ku -meel -gaar ah oo aad ku xulan karto rasiidhada aad rabto inaad isticmaasho. Kadib marka la bixinayo, waxay si otomaatig ah u dabaqi doonaan.
In kasta oo hal kuuban aysan ku siin doonin qiimo dhimis aad u weyn, waxaad wax badan badbaadin kartaa markaad haysato rasiidhyo kala duwan.
#2: Qorshee Jadwal Toddobaadle ah Waqtiga ka hor
Qorsheynta cuntadaada goor hore ayaa kaa caawin doonta go'aaminta alaabta cuntada iyo xaddiga aad u baahan tahay ka hor intaadan aadin suuqa. Habkan waxaad ku qasban tahay inaad iibsato waxyaabaha gaarka ah ee aad u baahan tahay oo aad u diyaar garowdo quraac, qado, iyo cashada.
Sidoo kale, waa inaad cunno cuntooyin leh cuntooyinka ku jira qorshahaaga toddobaadlaha ah sidaa darteed waa inaad wax yar iibsataa.
Halkii aad si aan kala sooc lahayn u qorshayn lahayd cuntooyinkaaga toddobaad kasta, hubi iibka dukaamada waaweyn ee xaafaddaada, oo u samee qorshahaaga cuntada adiga oo ku salaynaya.
Tusaale ahaan, haddii dabagalka digaaggu uu aad ugu yar yahay iibka dukaanka raashinka ee xaafaddaada, qorshee qaar ka mid ah cuntooyinka ay ku jiraan digaagga. Haddii tufaax la iibinayo, waxay noqon kartaa toddobaad cajiib ah in lagu dubo tufaaxa tufaaxa ee aad jeclayd!
#3: Ku dukaameyso Dukaan Qiimo Badan
Si loo yareeyo dukaamaysigaaga raashinka, waxaad suuqyada beeralayda maxalliga ah ka heli kartaa dhammaan alaab kala duwan oo qiimo jaban lagu bixin karo.
Fiiri dukaamada raashinka ee agagaarkaaga guud si aad u hesho meesha ugu fiican ee ku siin doonta alaab qiimo jaban oo tayo leh.
Dukaanno yar ayaa laga yaabaa inay bixiyaan alaabo jumlo ah, waxaad ka iibsan kartaa dukaamada noocaas ah. Qaadashada badeecadaha daruuriga ah ee aan qaaliga ahayn sida caanaha iyo caano fadhi waxay kaloo yeelan karaan saamayn weyn muddo ka dib.
#4: Qaboojiyaha Cuntadaada
Qaboojinta cuntadaada cusub ka hor inta aysan dhalan waxay kaa caawineysaa boorsadaada waxayna kuu keydineysaa lacag aad u badan.
Waxaad diyaarin kartaa oo qaboojin kartaa cuntadaada si aad waqti ugu hesho cunto karinta maalmaha shaqada, ama haddii cuntadii toddobaadkii hore ay sii hadhay, waad qaboojin kartaa ka hor intaadan raadin inaad mid kale iibsato.
Mararka qaarkood, khudaarta barafaysan waa wax aan la rumaysan karin maraqa iyo maraqa, waxaadna u isticmaali kartaa miraha aad keydisay quraacda macaan ee macaan.
Baro talooyin lacag-badbaadin ah oo ku saabsan sida loo keydsado raashinka.
Akhriso maqaalkeena Intee In La'eg Ayaan Ku Bixiyaa Raashinka?
Si kooban, adoo ogaanaya masiibada, waa inaad yareysaa kharashyadaada oo aad barataa inaad ku samayso ilo yar.
Talada ayaa ah in la isticmaalo xisaabiyaha raashinka halkan si loo qiyaaso miisaaniyadda cuntada billaha ah iyo toddobaadlaha ah ee ku salaysan tilmaamaha ka soo baxa qorshaha cuntada billaha ah ee USDA.
Geli tirada qoyskaaga iyo faahfaahinta hoose si aad u xisaabiso inta miisaaniyadda raashinka nafaqada leh ay tahay inay kugu kacdo.
Dabcan, qoys walba waa mid gaar ah. Markaad dejiso miisaaniyaddaada, isticmaal slider -ka si aad ugu hagaajiso qiyaastaada caadooyinkaaga kharash -garaynta. Kaliya samee waxa adiga kuu fiican.
Helitaanka miisaaniyadda cuntada ee dhibicda waxay qaadataa barashada iyo ku -dhaqanka badan. Markaa waxaad u baahan doontaa inaad barato oo aad ku celceliso.
Markaa talooyinkan iyo caadooyinka kharashaadka saxda ah, waxaad ku filnaan doontaa kharashaadkaaga nolosha iyo yoolalka maaliyadeed ee xiisaha leh sida bixinta amaahda ama iibsashada guri oo runtii waad ku noolaan doontaa waqtiga.
Immisa ayay ku kacaysaa in la bilaabo Podcast -ka 2022 | Tilmaan Buuxo
Maydh. com-Intee in leeg ayay tahay in Miisaaniyaddaada Raashinka Billaha ah + Xisaabiyaha Raashinka
Waqtiga ugu Fiican ee Lagu Iibsado Taayirada 2022 | Tusaha Iibsiga oo Buuxa
15 Barnaamijyada Xulufadeed ee ugu Fiican Bilowga sanadka 2022 | Hagaha Buuxa
Dib -u -eegista Bangiga Aspiration 2022: Ma Xalaalbaa Mise Waa Fadeexad | Siduu U Shaqeeyo.
Raadinta bangi aan caadi ahayn oo daneeya meeraha? Bangiga Aspiration waa mac-hadka aad tagto. Oo haddii…
Maalintii hore, markii dadku u baahnaayeen inay la socdaan dhaqaalahooda, waxay yeelan lahaayeen buug -yare. Sida hufan…
Daqiiqad 16 akhri
15 Barnaamijyada Hormarinta Lacagta Ugu Fiican ee Ku Caawinaya Ilaa Lacag -bixinta | 2022
Haddii aad raadineyso inaad xalliso biil ama arrin degdeg ah laakiin maalinta jeeggaagu weli yahay…
Moneygram ma aqbalaa American Express? Jawaabaha ugu Fiican
Waxaan naftayda qabtay anigoo ka fikiraya dhawaanahan, "MoneyGram ma aqbalaan American Express?" iyo sababta oo ah maan hubin inaan haysto…
SIDEE LOO BILAABAA GANACSIGA LATALIYE DHAQAALE
Marar badan, la-taliye dhaqaale ahaan, waxa laga yaabaa in lagugu koriyo su'aalo ku saabsan sida loo bilaabo dhaqaale…
Ma inaan iibsadaa baabuur cusub ama baabuur la isticmaalay? Sababaha ay mudan yihiin
Iibsashada baabuur cusub ama baabuur la isticmaalay sannadka 2022 waa in si weyn loo go'aamiyaa miisaaniyaddaada. Baabuurta cusub…